Karana vavy roa noraisim-potsiny teny Ivato : sarona tao anaty silipony ny volamena 2 kg mahery | NewsMada
Karana vavy roa noraisim-potsiny teny Ivato : sarona tao anaty silipony ny volamena 2 kg mahery
Nafenin’ireto teratany Karana vavy roa tao anaty silipony, tao anaty “serviette hygiénique” ny volamena milanja 2 kilao sy 240 grama, saika haondrana an-tsokosoko any ivelany. Saron’ny zandary ihany ny anao vavy, ny talata lasa teo.
Ny zandary no nahatratra ireo, taorian’ny vaovao nomen’olona azy ireo. Tany amin’ny Tarmac, faritra iadidian’ny zandarimaria hiditra amin’ny fiaramandina Air Mauritius izy ireo no navoakan’ny zandary nosavaina. Araka ny fanazavana avy amin’ny zandary, nahazo vaovao marim-pototra izy ireo momba ny fisian’ny volamena kasaina haondrana. Niantso ny mpiasan’ny ladoany, ny ACM, ny polisim-pirenena ary ny CIS ny avy amin’ny zandarimaria hanaovana fisavana ireo Karana roa vavy eo imason’ny rehetra. Nisava ny mpiasan’ny ladoany, saingy tsy nahita na inona na inona. Nanao ny fisavana koa avy eo ny zandary vehivavy miasa eny amin’ny seranam-piaramanidina, ka tratra tany amin’ny faritra maha vehivavy azy ireo volamena milanja 2 kilao sy 240 grama. “Sarona ireo volamena na tsy hitan’ny sampana hafa nisava aza sy efa nandalo scanner. Nafenina tao anaty “serviette hygiénique” rahateo ireo volamena”, hoy ny fanazavan’ny avy amin’ny zandarimaria. Nanamafy ireto farany fa misokatra ny fanadihadiana momba ity raharaha ity mba hikarohana ireo rehetra voakasika na mivantana na ankolaka.
“Na misy aza ny resabe atao mikasika ny asa iandraiketan’ny zandarimariam-pirenena eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, tafiditra tanteraka amin’ny asa tsy maintsy ataon’ny zandary ny toy izao amin’ny faritra iandraiketany, ary nahitana vokatra noho ny fahazoana vaovao”, hoy ny fanamafisan’ny Jly Rakotomahanina Florens, lehiben’ny CIRGN teny Ankadilalana omaly, nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety.
Toy ny mamaly ny nambaran’ny mpiasan’ny ladoany momba ny fisavana eny amin’ny seranam-piaramanidina ry zareo zandary. Ny mpiasan’ny ladoany izay nilaza tamin’ny mpanao gazety fa araka ny lalàna, izy ireo ihany no afaka manao fisavana ekonomika. Raha ny fanazavan’izy ireo, fisavana mahakasika ny fanondranana an-tsokosoko sy fampidirana entana an-tsokosoko na harem-pirenena izany. Momba ny resaka fitaovam-piadiana sy ny mitovitovy amin’izany ny anjaran’ny zandarimaria.
Nanazava ny zandary fa tsy misy ny fisandohana andraikitra ataon’izy ireo satria mazava ny lazain’ny andininy faha-267 andininy 1 sy 2 ao amin’ny “code des douanes” manamabara fa azon’ny mpiasam-panjakana hafa, ankoatra ny ladoany, atao ny manao fizahana mikasika ny fandikan-dalàna momba ny ladoany ary ataony koa ny fitazonana ny entana tratra amin’izany. “Azon’ny zandary atao koa izany amin’ny maha “officier de police judiciaire” azy ireo », hoy ny Jly Rakotomahanina Florens.
Mifandroritra lalàna eo ny roa tonta ary mifamaly ankolaka amin’ny asa tanterahina eny amin’ny ladoany. Mbola fanontaniana mipetraka ny momba ny resaka fisavana eny amin’ny seranam-piaramanidina. Misy ny gaboraraka sy ny firaisana tsikombakomba. Maro ny entana efa tafavoaka teny Ivato ary tany ivelany vao tratra. Tsy vitsy koa ny volamena efa tratra, ary hanaovana famotorana saingy tsy hita veroka ny tohiny. Samy tompon’andraikitra ny rehetra, ary miandry ny vaovao tena marina ny vahoaka momba ireo mpanondrana harem-pirenena an-tsokosoko, ny mpiray tsikombakomba aminy eny Ivato, sns, fa tsy saronana amin’ny fifandroritana amin’ny samy manam-pahefana fotsiny ihany.